News Collection: हामी कसरी सँगै बस्न सकौंला ?
हामी कसरी सँगै बस्न सकौंला ?
हाम्रो प्रेम चलेको दुई वर्ष भयो। हामी एक-अर्काबिना बाँच्ने कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं, तर हामीबीच एउटा समस्या छ। त्यो समस्या भनेको हामीबीच टाढाको नाता सम्बन्ध हुनु हो। हामी दुवैको परिवारले हाम्रो सम्बन्धलाई स्वीकार गर्न सक्दैन। हामी एक-अर्काबाट अलग हुन पनि सक्दैनौ। यस्तो अवस्थामा के गर्दा बेस होला ? हामी कसरी सँगै बस्न सकौंला ?
मानिसको जीवनमा सामाजिक तथा जातीय परम्पराको आफ्नै महत्व छ। मानिसहरू प्रेमका नाममा उन्मक्त हुन नसकून् भनेरै सभ्यताको क्रमसँगै जातीय तथा सामाजिक परम्पराहरूको विकास भएको हो। यस्तो सामाजिक परम्पराहरूले कतिपय नाता सम्बन्धमा विवाहलाई वर्जित गरेको छ। त्यसो गरिनुको वैज्ञानिक कारणहरू पनि छ। प्रत्येक मानिसका आ-आफ्नै रक्त समूह भए पनि रगतमा रहेको वंशाणुगत गुण दोषका आधारमा हाम्रा पूर्वजहरूले गोत्र तथा समूहको विकास गरेका हुन्। जसलाई वैज्ञानिक तथ्यहरूले पनि पुष्टि गरेका छन्, त्यसैले सम्भव भएसम्म नाता-सम्बन्धमा विवाह गर्नु हुँदैन। तपाईको हकमा तपाईंले मन पराएकी युवती र तपाईंबीचको नातासम्बन्ध कति नजिकको हो ? त्यो थाहा भएको भए जवाफ दिन सजिलो हुने थियो। तपाईं दुवैको परिवार तपाईंहरूको विवाहको पक्षमा नभएको देख्दा तपाईंहरूको नाता -सम्बन्ध विवाहको परिधिभन्दा बाहिर रहेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा म तपाइर्ंहरूलाई विद्रोह गरेर सामाजिक परम्पराविरुद्ध उभिने सल्लाह दिन सक्दिनँ। यद्यपि कतिपय जाति, समुदायमा कतिपय नातासँगको विवाह वर्जित छैन। तपाईंहरूबाट गल्ती भएको छ भने त्यस्तो गल्तीलाई सच्याउँदै विवाह हुन नसक्नुको कारणलाई स्वीकार गर्नुमै तपाईंहरूको मात्र नभै परिवारका अरू सदस्यको समेत हितमा देखिन्छ।